Kyaw Zay Ya » Category » Blogfest.asia
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Category Archive: Blogfest.asia October 2nd, 2012
0 Blogfest Asia 2012 in Cambodia If you want to meet with bloggers from around the asia it’s not too late to apply. I had been attend2times in Hong Kong 2009 and Malaysia 2010, truely interesting, Now Cambodia blogger are organizing the blogfest asia 2012 in Siem Reap on November 1-5. Registration for the event is now open. below is message from organizers.
Tweet This Post blogfest 2012, blogfest cambodia, Blogfest.asia blogfest 2012 , blogfest.asia , cambodia October 10th, 2010
0 Blogfest Penang ဒေသခံ Blogger နှင့် MBS ဒီတစ်ခေါက် blogfest ကိုသွားရတာ အရင်တစ်နှစ်တုန်းကလို နှစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တော့ ပျော်ဖို့တော့ ကောင်းသား။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် Hong Kong မှာ လုပ်တုန်းက ကိုသက်ထူး(မျက်လုံး) နဲ့ ကျနော် နှစ်ယောက်တည်းရယ် သူကလဲ အေးအေးဆေးဆေးသမား၊ စကားအများကြီး သိပ်မပြောတတ်တဲ့လူ ပြီးတော့ ကျနော်ကလဲ စကား နည်းတဲ့ လူဆိုတော့ နှစ်ယောက်သား ပျင်းလိုက်တာ ဆိုတာ။ ဒီနှစ်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ငါးယောက်ကြီးတောင်မှ သွားရတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထက် စာရင် နည်းနည်းတော့ ပိုပျော်ဖို့ ကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ။
Vietnam, Myanmar, Malaysian Bloggers ငါးယောက်ကလဲ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ လူတွေချည်းပဲ ကိုဇော်ဇော်၊ မဘာညာ၊ ပင့်ဂိုးလ်၊ နန်းညီနဲ့ ကျနော်၊ နေ့တိုင်း တွေ့နေတာတောင်မှ စကားမရှိ စကားရှာ ပြောနေကြတဲ့လူတွေ ခရီးအတူတူ သွားတယ်ဆိုတော့ ကဲ ဘယ်မှာ လာပျင်းဖို့ အချိန် ရှိတော့မှာလဲ။ တည်းတော့လဲ ငါးယောက် အတွက် အခန်းနှစ်ခန်း ရတာတောင်မှ နှစ်ခန်းမှာ လူခွဲ မနေကြတော့ပဲ family room တစ်ခု ယူလိုက်ပြီးတော့ အဲဒီ့ အထဲမှာပဲ ငါးယောက် အတူတူ စုနေလိုက်ကြတော့ တယ်။
closing ceremory group photo
Blogfest.asia ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ Hong Kong မှာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ကျင်းပါတယ်။ အခု Penang ကတော့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ပါ။ ကျင်းပ ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒေသတွင်း မှာ ရှိကြတဲ့ Blogger/journalist တွေ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ သူ့နိုင်ငံ ကိုယ့်နိုင်ငံ အခြေအနေအလိုက် အသိအမြင်၊ အတွေ့အကြုံ ပူးပေါင်း ဖလှယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ Penang ပြည်နယ် အစိုးရက Penang ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမို တိုးတက်အောင်မြင်အောင် လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ Blogfest အတွက် Sponsor ပေးပါတယ်။ Tourism Malaysia က Blogfest တက်ရောက်လာတဲ့ လူများကို Heritage site Tour များ အပြင် ညစာတည်ခင်း ဧည့်ခံ ခဲ့ပါတယ်။ Online ပေါ်မှာ ရေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် Blogger တွေကို တွေ့ဆုံရတာ အင်မတန်မှ ၀မ်းသာဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေလဲ တော်တော် ရလိုက်ပါတယ်။ Penang မှာ Food Blogger တွေကတော့ တခြား Blogger ထက် ပိုများသလိုပါပဲ။ ၁ ရက်နေ့ ကနေ ၃ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁ ရက်နေ့ က Penang Heritage Site Tour ၂ ရက်နေနဲ့ ၃ ရက်နေ့မှာတော့ အခန်းအလိုက် အခန်းအလိုက် ခေါင်းစဉ် အလိုက် အတွေ့အကြုံတွေ နည်းပညာတွေ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ Online Security ဘက်မှာ နှစ်ရက်စလုံး နေခဲ့ပြီးတော့ အခါအခွင့်သင့်မယ်ဆိုရင် ကျနော် ရခဲ့တဲ့ Security နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေကို ပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပါ့မယ်။
Myanmar, Cambodia, Philippine, India
Tweet This Post Blogfest.asia blogfest.asia September 22nd, 2010
1 Blogfest.Asia come again in Malaysia Hello again blogfest.asia, I will come this year again to you. Me and my friend attended that event last year in Hong Kong, his Blog Name is EYE. Now he is father of2child, long time ago right? . In this yearsalot of MBS(Myanmar Blogger Society) cool members will attend in Penag(Malaysia). I am very happy for blogfest.asia held in Malaysia because I do understand Bahasa Malayu Can’t wait to see you there…HOOOOYAYYYYYY!!!!!!!!!!!!! Tweet This Post Blogfest.asia, Malaysia November 13th, 2009
0 Blogfest.Asia photos …Blogfest.Asia photos…
ကျနော်တို့ သွားခဲ့တဲ့ Blogfest.Asia ပွဲက ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ Tweet This Post Blogfest.asia October 26th, 2009
0 Blogfest.asia Blogfest.asia isafestival for bloggers in Asia. This is the region’s 1st cross-border gathering for blogger community. Everyone is welcome to join the festival and meet hundreds of bloggers from the neighborhood community. Participants will be able to learn blogger / blogging activities in perspective countries / territories, and interact with key bloggers in Asia.
The 3-day Blogfest.Asia ‘09 provides an unique opportunity to address “Change & Responsibility”, in Asia perspective. The event program at-a-glance will consist of:
two evening gathering / parties exclusively for participating bloggers (11/5 &6evening)
The organizing commitee of Blogfest ‘09 include:
Ching CHIAO (@chiao)
Jeremiah FOO (@jeremiahfoo)
Gen KANAI (@gen)
Rebecca MACKINNON (@rmack)
Issac MAO (@isaac)
Event host, logistic and administrative support is provided by DotAsia (@registryasia).
Tweet This Post Blogfest.asia May 2013